Kasoo bilow shimbirihii jaceylka ku xiji jaceylkaa kuu eg ilaa ay caruur isaga dhalaan iyo xiriirkii jaceyl ee guuleystay misna dhex maray Fahriye Evcen iyo Burak Ozcivit. | Filimside
Home ARRIMAHA BULSHADA Kasoo bilow shimbirihii jaceylka ku xiji jaceylkaa kuu eg ilaa ay caruur...
Kasoo bilow shimbirihii jaceylka ku xiji jaceylkaa kuu eg ilaa ay caruur isaga dhalaan iyo xiriirkii jaceyl ee guuleystay misna dhex maray Fahriye Evcen iyo Burak Ozcivit.
Burak Ozcivit iyo Fahriye Evcen haatan waa lamaanaha ugu shacbiyada balaaran gudaha turkiga wuxuuna xiriikooda soo bilowday 2014tii intii ay ku jireen duubista taxanihii hirgalay ee CaliKusu.
Lamanahaan oo haatan is qabo sidoo kalana uu u joogo wiil bilooyin jira ayaa sanadki 2014tii ku kulmay iskuna bartay taxanaha CaliKusu (Shimbirihii Jaceylka) kaasoo guul fiican gaaray daawadayaashana aad usoo dhaweeyeen.
Balse taxanahaas mudadii uu socday waxaa dhacday iney aad isugu soo dhawaadaan Burak iyo Fahriye isfaham fiicana uu dhexmaro balse wax xiriir ah iyo jaceyl ma aysan wadaagin inkastoo taxanaha jaceyl ku wadaageen.
Markuu dhamaaday taxanahaas ayaa hadana waxay ku kulmeen misna markale mideeyay filimka Ask Sana Benzer (Jaceylka adiguu kuu egyahay) oo uu soo saare iyo qoraaba ka ahaa isla Burak Ozcivit.
Lamaanahaan oo ka sheekeynaayay sidii xiriirkooda kusoo bilowday ayaa sheegeen in mudadii ay socotay duubista filimka Ask Sana Benzer ay aad isugu soo dhawaadeen sidoo kalana quluubtooda midowday.
Kadib filimkaas Burak iyo Fahriye ayaa xiriirkooda banaanka keenay balse waxay mashaqo bilaabatay markii dhamaadkii sanadkii 2015tii uu Burak shaashada jaceyl kula wadaagay atariishada soo jiidashada leh ee Neslihan Atagul waxayna shaashada ku wadaageen muuqaalo dareen ku dheehan taasoo aad u kicisay isla markaasna sababtay in Fahriye maseerto.
Dhibka ugu weyn ayaa wuxuu ahaa saxaafada oo arinka dab kusii shiday isla markaasna arinkaan aad u daba kacday balse Burak oo Fahriye aad u jecel ayaa arinka biyo qabow ku shubay wuxuuna si uu Fahriye u qanciyo xiriirka saaxiibtinimo u jaray Neslihan Atagul inkastoo ilaa sanadkii 2017dii shaashada bah wadaag ku ahaayeen maadaama uu socday taxanahooda guusha weyn gaaray ee Kara Sevda.
Sanadkii 2017dii markuu dhamaaday taxanaha Kara Sevda Burak ayaa durba horay ka guursaday Fahriye waxayna bilowgii sanadkaan 2019ka u dhashay wiil ay ugu magac dareen Karan.
Lamaanahaan ayaa haatan ah kuwa ugu shacbiyada balaaran gudaha turkiga iyagoona ku nool magaalada Stanbul.
Previous articleGriezmann oo lagu amray inuu tababarka Atletico kusoo laabto iyo United oo De Light ku guuleesan rabto:
Next articleQaabka ugu fudud ee timaha dhaqso kuugu tarmi karaan iyo macluumaad kale oo layaab leh.